အော်တိုကရေစီ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အော်တိုကရေစီ	Posted by mm thinker on July 22, 2008
Posted in: Politics.	Tagged: Politics.	ဒေါ်ပင့်ဂိုးလ်ဒ်ရေ။ ဒါကတော့ အော်တိုကရေစီရဲ့ အဖွင့် အကျဉ်းပါပဲ။ လည်ပတ်ပုံကို သိချင်ရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ စားပွဲပေါ်က သတင်းစာကိုသာ ကောက်ကြည့်လိုက်တော့။
ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် Absolutism (အကြွင်းမဲ့ အာဏာပိုင်စနစ်)၊ Authoritarian (အာဏာပိုင်များကြီးစိုးရေးဝါဒ)၊ အခုအကျဉ်းချုပ်ရေးထားတဲ့ Autocracy (သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်), Dictatorship (အာဏာရှင်စနစ်)နဲ့ Junta (စစ်အစိုးရ)တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက အချုပ်အထိန်းမရှိ၊ အကန့်အသတ်မရှိ အာဏာကုန် ကိုင်တွယ်၍ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးသောစနစ်၊ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ကို သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက အာဏာအလုံးစုံကိုင်၍ အုပ်ချုပ်လျှင်လည်း အော်တိုကရေစီ (Autocracy) ဟုပင် သုံးနှုန်းသည်။ ယင်းသို့ တဦးတည်းအာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးသော ခေါင်းဆောင်ကို အော်တိုကရက် (Autocrat) ဟုခေါ်သည်။
ရည်ညွှန်းကိုးကား – နိုင်ငံရေးအဘိဓာန်၊ အတွဲ (၁)၊ NCGUB
← ဒီမိုကရေစီ (Democracy)	ဗုဒ္ဓပေးခဲ့သော ကတိရှိသလား →	Pages	about